အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း မေ ၂၀၁၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း မေ ၂၀၁၄
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း မေ ၂၀၁၄
Posted by kai on May 7, 2014 in Editor's Notes, Myanmar Gazette | 25 comments
Corruption the biggest concern for Myanmar businesses – surveyMay 6, 2014 – 12:23
YANGON (Reuters) – Corruption is the top concern for businesses in Myanmar, which is undergoing liberal reforms after the end of military rule, according toaUN-led survey released on Tuesday.
Five decades of military rule left Myanmar mired in poverty and plagued by corruption, butaquasi-civilian government that took power in 2011 has enacted sweeping political and economic reforms aimed at attracting foreign investment and cleaning up the economy.
However, the survey suggests the reforms have thus far had onlyalimited impact on corruption.
About 20 percent of the more than 3,000 firms questioned identified corruption asa“very severe obstacle” to their operations, according to the survey from the United Nations, the Organisation for Economic Co-operation and Development and the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI).
Access to skilled labour and technology were identified as the second and third biggest obstacles.
Sixty percent of the firms surveyed said they had to pay bribes for registration, licences or permits. About half the firms said they paid $500 in extra fees while aboutadozen said extra fees exceeded $10,000 (5,892 pounds).
Please explain why we call tayoke to Chinese?
Thant Myint-U It’s related (most probably) to “Turk”. Yunnan in the 13th century was ruled byamainly Turkic-speaking Muslim elite (under the Mongols). By the 1800s Yunnan was aboutathird Muslim – mainly people of Turkic descent but also others. The Burmese probably called these people Turks (now pronounced Tayoke), but the word gradually came to signify all people from the northeast (eg Chinese).
Interesting discussion with an interesting mix of Myanmar voices: 88 Generatiion U Ko Ko Gyi, Central Bank Vice Governor U Winston Set Aung, Myanmar Peace Centre Dr Min Zaw Oo, and Yoma Securities Chairman U Serge Pun at last week’s Milken Institute “Global Conference” in LA, moderated by former US Asean ambassador David Carden.
In 2012, the U.S. government began improving its ties with long-isolated Myanmar. The small Asian country had openedanew chapter with reforms that included the release of political prisoners, expanded press freedom and parliamentary elections. On the economic front, Myanmar assumed the chairmanship of the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, this year, giving itapivotal role in the economic integration of its 10 member countries, planned for 2015. But while the international community supported Myanmar’s moves toward national reconciliation and transparent governance, the transition hasn’t been smooth and the results have been mixed. Will Myanmar maintain its commitment to reform? Can it sustain growth, leverage its natural resources and generate jobs? Our panel will discuss what’s happening on the ground in Myanmar and the developing nation’s path forward.
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဧပြီလအတွင်း လူသတ်မှု ဖြစ်စဉ်များကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး၌ တစ်ရက်လျှင် ပျမ်းမျှ လူငါးဦးနှုန်း သေဆုံးနေကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ လူသတ်မှုကြောင့် တစ်ရက်လျှင် ငါးဦးနှုန်း သေဆုံးနေသည်ဆိုသည့် အချက်မှာ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသော ပမာဏဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူမြင်ကွင်းတွင် မျက်နှာဖုံးစွပ် အုပ်စုလိုက်သတ်ဖြတ်မှု၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူမြင်ကွင်းတွင် ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုတို့မှာ အများပြည်သူကြား တုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အားကိုးရာမဲ့နေသလို ကျီးလန့်စာစား အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်နေစေသည်။ ပြည်သူများအနေဖြင့် ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်မြို့နယ်၊ ကိုယ့်အရပ်ဒေသ အတွင်းမှာမှ လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို မခံစားရဘူးဆိုလျှင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမှာ မေးခွန်းထုတ်လာစရာ အကြောင်းဖြစ်သည်။ – See more at: http://news-eleven.com/editorial/
A Thai court has ordered Prime Minister Yingluck Shinawatra and several cabinet ministers to step down.
The Constitutional Court ruled that Ms Yingluck acted illegally when she transferred her national security head.
The ruling follows months of political deadlock. Anti-government protesters have been trying to oust Ms Yingluck since November 2013.
The remaining cabinet members have nominated the commerce minister to replace Ms Yingluck.
ဒါဆိုရင်​ သန့်​မြင့်​ဦးရဲ့​ပြောပုံအရ ​ရှေးမြန်​မာများကဟိုးအရင်​က တာ့ခ်​ လူမျိုး (တာတာ လို့​ခေါ်တဲ့ မွန်​ဂိုအနွယ်​ အစ္စလာမ်​ဘာသာကိုးကွယ်​သူ​တွေကို )တာ့ခ်​လို့​ခေါ်ရင်း တရုတ်​လို့အခု​ခေတ်​မှာ အ​ခေါ်​ဝေါ်​ပြောင်းလာတာ​ပေါ့
စိတ်​၀င်​စားစရာပဲ အဲ့ဒါကိုခု​ခေတ်​မှာ ပြည်​မချိုင်းနားကလာတဲ့ ချိုင်းနီးစ်​​တွေကိုပါ သိမ်းကျုံး​ခေါ်လိုက်​​တော့ ပွဲသိမ်းသွားတာ​ပေါ့
မှားမယ်​ဆိုလည်း မှား​လောက်​တယ်​ အားလုံးကပြည်​မဖက်​ကပဲဆင်းလာကြတာဆို​တော့ ဇာစ်​မြစ်​ကို​သေချာမသိရင်​ မှားချင်​စရာပဲ​လေ ဒီအ​ကြောင်းကို ကိုယ်​တိုင်​တရုတ်​လို့အ​ခေါ်ခံရတဲ့သူ​တွေ​တောင်​ သိမယ်​မထင်​ဘူး
လူမည်း​တွေ​တောင်​ သူတို့ဇာစ်​မြစ်​ကိုပြန်​ရှာပြီး ​သေအချာ​နောက်​​ကြောင်းလိုက်​ထားတာ အဲလက်​စ်​​ဟေးလ်​​ရေးတဲ့ ဇာစ်​မြစ်​ (The Root) ကိုသာကြည့်​ ဖတ်​ရင်းနဲ့ ကိုယ်​ပါ အဲ့​ခေတ်​​ရောက်​သွားသလိုပဲ
အ ပေါ်က ဓာတ်ပုံ က
အခု ပအိုဝ် လူမျိုးတွေရဲ့ ခေတ်သစ် ရှင် ပြု အလှူ
လား ရှင် လောင်းကို ဆိုင် ကယ်စီးပြီးလှည့်တာ အံ့ရော
လုလုနဲ့ကြောင် အဲလိုပွဲမျိုးအတူနွှဲရလျင် ဘယ်လောက်မား ကောင်းလိုက်မဲကွယ်..
ဝသလသုတ္တန်မှ အောက် ပါဂါထာနှစ်ဂါထာကို ထုတ်နုတ် ဖော်ပြလိုပါတယ်။
ကောဓနော ဥပနာဘိစ၊ ပါပမက္ခီစ ယောနရော
ဝိပန္နဒိဋ္ဌိမာယာဝီ၊ တံဇညာ ဝသလောဣတိ
‘‘အကြင်သူသည် အမျက် ထွက်လေ့ရှိ၏၊ ရန်ငြိုးဖွဲ့တတ်၏၊ ယုတ်မာသည်ဖြစ်၍ သူ့ကျေးဇူး ကိုချေဖျက်တတ်၏၊ အယူပျက်စီး သူဖြစ်၏၊ လှည့်ပတ်တတ်၏၊ ထို သူကို သူယုတ်မာဟူ၍ သိရာ၏’’
နဇစ္စာဝသလောဟောတိ၊ နဇစ္စာဟောတိ ဗြဟ္မဏော
ကမ္မုနာဝသလောဟောတိ၊ ကမ္မုနာဟောတိ ဗြဟ္မဏော
‘‘အမျိုးဇာတ်ကြောင့် သူယုတ်မာမဖြစ်နိုင်၊ အမျိုးဇာတ် ကြောင့် ဗြဟ္မဏမဖြစ်နိုင်၊ မိမိပြု သောအမှုကြောင့်သာလျှင် သူယုတ်မာဖြစ်ရ၏။ မိမိပြုသောအမှု ကြောင့်သာလျှင် ဗြဟ္မဏဖြစ်ရ၏’’
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးဂျာစီမြို့က နှစ်စဉ်ရွေးချယ်သည့် အကောင်းဆုံး ဆရာဝန်များ စာရင်းတွင် ရွေးချယ်ဂုဏ်ပြုခံရသူ ဒေါက်တာအလက်ဇန်းဒါးမြင့်စွမ်း (MBBS, MD, FACP) နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးဂျာစီမြို့က နှစ်စဉ်ရွေးချယ်သည့် အကောင်းဆုံး ဆရာဝန်များစာရင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာအလက်ဇန်းဒါးမြင့်စွမ်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ရွေးချယ်ဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ ဒေါက်တာ အလက်ဇန်းဒါးမြင့်စွမ်းသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ပေးအပ်သည့် အကောင်းဆုံး ဆရာဝန်ဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါ နယူးဂျာစီပြည်နယ်တွင် နှစ်စဉ်ရွေးချယ် ပေးအပ်သော အကောင်းဆုံး ဆရာဝန်ဆုကို မြန်မာနိုင်ငံသား ဆရာဝန်တစ်ယောက် အနေဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဆုကို မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးအနေဖြင့် ပထမဆုံးအကြိမ် ရရှိခဲ့သူ ဒေါက်တာအလက်ဇန်းဒါးမြင့်စွမ်း MBBS, MD, FACP ကျောက်ကပ်ရောဂါနှင့် အထွေထွေ လူကြီးရောဂါကု သမားတော်ကြီးအား The Daily Eleven က အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် သီးသန့်မေးမြန်း ခဲ့ပါသည်။
‘မြန်မာနိုင်ငံသား ဆရာဝန်တစ်ယောက် အနေနဲ့လည်း ပထမဆုံးရတဲ့ဆု ဖြစ်ပါတယ်’
မေး – အရင်ဆုံး ဆရာ့ကိုယ်ရေး အကျဉ်းလေး သိပါရစေ။
ဖြေ – ကျွန်တော့်ကို ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ ရန်ကုန်မြို့က အမေရိကန်ဆေးရုံမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် ဆေးရုံဆိုတာ အခု နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း ဆေးရုံပါ။ ကျွန်တော့် မိဘတွေကတော့ တွံတေးမြို့ကပါ။ အဲဒီမှာ ကုန်စုံဆိုင် ဖွင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မွေးတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်အဖေက သင်္ဘောနဲ့ ကုန်ကူးရင်း သင်္ဘောနစ်လို့ ဆုံးသွားပြီ။ ကျွန်တော့်အဖေ ဆုံးတဲ့အချိန်မှာ အမေက ကျွန်တော့် ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ပါ။ ကျွန်တော်မွေးပြီး တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့ အခါကျမှ ကျွန်တော်တို့ မိသားစု ရန်ကုန်ပြောင်းလာပြီး အခြေချ နေခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော် ကျောင်းစတက်တော့ လမ်းမတော်က မူလတန်းကျောင်းမှာ တက်ရတာ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက တိုင်းပြည် အခြေအနေကလည်း အတော်လေး မငြိမ်မသက် ဖြစ်နေတော့ ကျောင်းအမျိုးမျိုး ပြောင်းတက်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော် ရှစ်တန်းလောက်ရောက်တော့ မနက်ပိုင်း ကျောင်းတက် ညနေဘက် မိသားစု ဆေးဆိုးပန်းရိုက် အလုပ်မှာ ၀င်လုပ်ပေးရတယ်။ အဲဒီလို အလုပ်တစ်ဖက် ကျောင်းတစ်ဖက်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပါးဖို့၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင် အချိန်ဖြုန်းဖို့လည်း မရှိခဲ့ဘူး။ အကောင်းပဲ ပြောရမယ် ထင်တယ်။ ကျွန်တော်အလုပ် လုပ်ရတာကို သဘောကျသွားတယ်။ အကျင့်ပါသွားတယ်ပေါ့။ ကျွန်တော် ရှစ်တန်းအောင်တော့ ဂုဏ်ထူးသုံးခု ပါခဲ့တယ်။ ကိုးတန်းရောက်တော့ အလုပ်လုပ်ဖို့ အချိန်ပိုရအောင်ဆိုပြီး ကျွန်တော်ညကျောင်း ပြောင်းတက်ခဲ့တယ်။ ဆယ်တန်းမှာ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကျတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆက်မဖြေတော့ဘဲ အပြင်ထွက်ပြီး အလုပ်ပဲလုပ်တာ သုံးနှစ်ကြာတယ်။ နောက်ဆယ်တန်းတွေ စနစ်သစ် ပြောင်းတော့မယ် ဆိုတော့မှ ကျွန်တော်ဆယ်တန်း ၀င်ဖြေလိုက်တာ အောင်သွားတယ်။ နောက်ဒေသကောလိပ်တက်ပြီး ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဆေးကျောင်းရအောင် တက်ခဲ့တယ်။ ဆေးကျောင်းကတော့ အခုလမ်းမတော်က ဆေး ၁ ပေါ့လေ။ အလုပ်သင် ဆရာဝန်က ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာပြီးတယ်။ အလုပ်သင် ဆရာဝန်ပြီးတော့ ကျွန်တော် အင်းစိန်မှာ ဆေးခန်းခဏ ထိုင်ခဲ့သေးတယ်။
မေး – ဆရာ အခုရတဲ့ ဆုအကြောင်းလည်း နည်းနည်းပြောပြပေးပါ။
ဖြေ – ဒီဆုက New Jersey Monthly ၀က်ဘ်ဆိုက်က ကြီးမှူးပေးအပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး အကောင်းဆုံး ဆရာဝန် ရွေးချယ်ရေးအတွက် နယူးဂျာစီမြို့မှာရှိတဲ့ ဆရာဝန် ၂၃၅၁၃ ဦးကို စစ်တမ်းကောက်ယူတယ်။ ဆရာဝန်တွေကို အဲဒီလိုစစ်တမ်း ကောက်ယူတဲ့ အခါမှာ မိမိတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို နယူးဂျာစီ မြို့မှာရှိတဲ့ ဘယ်ဆရာဝန်နဲ့ ကုသခံမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူတာဖြစ်ပြီး ရလာတဲ့ စစ်တမ်းကို အဖွဲ့ဝင် ဆရာဝန် ၂၅ ဦးပါဝင်တဲ့ နယူးဂျာစီ အကောင်းဆုံး ဆရာဝန်ရွေးချယ်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့က ရွေးချယ် စိစစ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီလို စိစစ်ပြီးတော့မှ မဲပေးရွေးချယ်မှုအရ ဆရာဝန် ၉၇၄ ဦးကို ရွေးချယ်ပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်စုစုပေါင်းရဲ့ လေးရာခိုင်နှုန်းသာ ဒီဆုကို ရရှိပါတယ်။ ဒီဆုက အများအားဖြင့်တော့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဆရာဝန်တွေနဲ့ ဥရောပဆရာဝန်တွေသာ ရရှိလေ့ရှိပါတယ်။ အခုကျွန်တော် ဒီဆုရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သိစေချင်တာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြွားချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံသား ဆရာဝန်တွေလည်း ကမ္ဘာပေါ်က အထက်တန်းဆိုတဲ့ နေရာတွေမှာ ရှိတယ်ဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကအောင်တဲ့ ဆရာဝန်မို့လို့ စိတ်ဓာတ်ကျစရာ မလိုဘူး။ မြန်မာတွေလည်း မညံ့ဘူးဆိုတာ သိစေချင်တာပါ။ ဒီဆုကိုရတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက် အနေနဲ့လည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ အမေရိကန်က ထိပ်တန်းဆိုတဲ့ ဆရာဝန်တွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာဆရာဝန်တွေ အနေနဲ့ အမေရိကန် ဆရာဝန်တွေထက် မနိမ့်ဘူး ဆိုတာကို ပြသနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုက ကျွန်တော့်အတွက် နယူးဂျာစီမြို့မှာ ပထမဆုံးရတဲ့ဆု ဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံသား ဆရာဝန်တစ်ယောက် အနေနဲ့လည်း ပထမဆုံးရတဲ့ဆု ဖြစ်ပါတယ်။
မေး – ဆရာ့ကို ဘာ့ကြောင့် ဒီဆုချီးမြှင့်တယ် ထင်ပါသလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ ဆုတွေထဲမှာ လူနာတွေက ရွေးချယ်ပေးတာလည်း ပါသလို ဆရာဝန်တွေ၊ ဆေးဝန်ထမ်းတွေက ရွေးချယ်ပေးတဲ့ ဆုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီဆုကတော့ ဆရာဝန်တွေက ရွေးချယ်ပေးအပ်တဲ့ ဆုတစ်ခုပါ။ ဆရာဝန် အချင်းချင်း ရွေးချယ်ခိုင်းတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သိပ်တော့ မလွယ်လှပါဘူး။ ဆရာဝန် တစ်ယောက်ကို ဆုရွေးချယ်တဲ့ အခါမှာ စိတ်ချယုံကြည်ရမှု ရှိမရှိ၊ အလုပ်ကြိုးစားတာ၊ တာဝန်သိတတ်တာ၊ လူနာကို စေတနာနဲ့ ဂရုတစိုက် ကုသပေးတာတွေကို ကြည့်ပြီး ရွေးချယ်ပါတယ်။
မေး – ဆရာ အမေရိကကို စတင်ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ အချိန်ကနေ အခုလို အောင်မြင်တဲ့ ဆရာဝန် တစ်ယောက် ဖြစ်လာတဲ့အထိ ဘယ်လိုတွေ ရုန်းကန်ခဲ့ရသလဲ ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ – ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော် အလုပ်သင်ဆရာဝန် ပြီးတယ်။ ၁၉၈၉ မှာတော့ ဆက်ပြီးပညာသင်ဖို့ စိတ်ကူးနဲ့ ကျွန်တော် အမေရိကကို ထွက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကတည်းက ကျွန်တော်အမေရိကကို ရောက်နေခဲ့တာပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက မြန်မာပြည်ကနေ အမေရိကန်ထွက်တော့ ၃၅ ဒေါ်လာပဲ ယူခွင့်ရှိတယ်။ အဲဒါနဲ့ ၃၅ ဒေါ်လာပဲ ယူပြီး ထွက်လာတာပေါ့။ အမေရိကန်ရောက်တော့ ရရာအလုပ်လုပ်ရင်း ကျွန်တော် စာမေးပွဲဖြေဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာ ဓာတ်ဆီ ထည့်ပေးတယ်။ ဟိုတယ်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ အိမ်သာဆေးတယ်၊ ပန်းကန်ဆေးတယ်၊ ကြမ်းတိုက်တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ရရာ အလုပ်မျိုးစုံလုပ် ပိုက်ဆံစုပြီး အမေရိကန်က ဆရာဝန် စာမေးပွဲအောင်အောင် ဖြေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် အမေရိကန် စရောက်တော့ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်က မြို့လေးတစ်မြို့မှာ နေခဲ့တာ။ ကျွန်တော်အမေရိကန် ဆရာဝန် စာမေးပွဲအောင်တော့ အဲဒီက University of Illinois ဆိုတဲ့ သင်ကြားရေး ဆေးရုံမှာ အလုပ်သင်ဆရာဝန် ပထမနှစ် ဆင်းခဲ့ရတယ်။ နောက်တော့ နယူးယောက်မြို့ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီး ဘရွတ်ကလင်းက ဆေးရုံမှာ အလုပ်သင် ဆရာဝန် ဒုတိယနှစ်နဲ့ တတိယနှစ်ကို ဆင်းခဲ့ရတယ်။ အဲဒီမှာ မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ ဆရာဝန် အတော်များများ ရှိတယ်ဗျ။ အဲဒီမှာ အလုပ်သင် ဆရာဝန်အဖြစ်ဆင်းရင်း ကျောက်ကပ်အထူးကု ပညာရပ်ကို မက်ဟန်တန်မြို့က Lenox Hill ဆေးရုံမှာ ဆက်လက်ဆည်းပူးခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာ ကျွန်တော် အသည်းအသန် ဝေဒနာများကို ပြုစုကုသရေး ဆေးပညာ (Critical Care Medicine) ကို ဆက်လက် ဆည်းပူးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် Critical Care Medicine ကို ဆည်းပူးခဲ့တာကတော့ နယူးယောက်က Memorial Sloan Kettering Cancer Center လို့ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး ကင်ဆာဆေးရုံ တစ်ခုပါ။ အဲဒီနောက် ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် ဆေးခန်းတစ်ခုကို နယူးယောက်က တောပိုင်းမှာ အမေရိကန် ဆရာဝန်တစ်ယောက်နဲ့တွဲပြီး ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ တစ်နှစ်လောက် ကြာပြီးတော့မှ ကျွန်တော်နယူးဂျာစီ ပြည်နယ်က ပရင်စတန်မြို့ကို ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။
မေး – ဆရာနယူးဂျာစီမြို့မှာ အခြေချနေထိုင်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ ဆရာ့အနေနဲ့ အဓိက ဘာလုပ်ရပါသလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော် အခုနယူးဂျာစီ မြို့မှာနေခဲ့တာ အနှစ်နှစ်ဆယ်လောက် ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် ဆေးခန်းဖွင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ကျောက်ကပ်အထူးကု ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဆိုတော့ ကျောက်ကပ် ဝေဒနာရှင်တွေ အတွက် ကျောက်ကပ်အစားထိုးခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်း အစရှိတဲ့ ကျောက်ကပ်ဝေဒနာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကုသမှုတွေ လုပ်ပေးရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆေးကျောင်းသားတွေ၊ အလုပ်သင် ဆရာဝန်တွေကို စာသင်ကြားပေးပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် သမ္မတ ဂျော့ဒဗလျူဘုရှ် လက်ထက်မှာ နယူးဂျာစီပြည်နယ် ဆေးပညာကောင်စီရဲ့ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ်လည်း ကျွန်တော်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
မေး – နယူးဂျာစီပြည်နယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား ဆရာဝန် ဘယ်နှယောက်လောက် ရှိပါသလဲခင်ဗျာ။
ဖြေ – ကျွန်တော် အတိအကျတော့ မသိဘူး။ ဒီမှာတော့ မြန်မာဆရာဝန် ရာဂဏန်းလောက် ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ နယူးယောက်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဆရာဝန် ထောင်ဂဏန်းလောက် ရှိပါတယ်။
မေး – ဆရာနယူးဂျာစီမှာရော ရုန်းကန်ခဲ့ရတာတွေ ရှိပါသလားခင်ဗျာ။
ဖြေ – နယူးဂျာစီမှာလည်း ကျွန်တော်ရုန်းကန် ခဲ့ရတာပေါ့။ ဒီမှာက အမေရိကန်နိုင်ငံသား တစ်ယောက်အတွက်တောင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခု တည်ထောင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ကျွန်တော့်လို နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်အတွက်ဆို ပိုလို့တောင် ခက်ခဲပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့က ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်ပီပီ ဘယ်တော့မှ ဘုရားတရားကို မမေ့ခဲ့ဘူး။ အဲဒီလိုနဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်း လာပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အောင်မြင်တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ အနေအထားတစ်ခုကို ရောက်ရှိနေပါပြီ။
မေး – ဆရာ့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြောကြားလိုတာများ ရှိပါသလားခင်ဗျာ။
ဖြေ – ကျွန်တော်မြန်မာပြည်က ထွက်လာတာ ကြာနေပြီ ဆိုပေမယ့် မြန်မာပြည်ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး။ ကျေးဇူးရှင်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ဖို့ အမြဲလည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျွန်တော် အတတ်နိုင်ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံကို ကျေးဇူးဆပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။ ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်နေတဲ့ ဒေသတွေအတွက် ကျွန်တော့်ချွေးနှဲစာနဲ့ ဆေးဝါးတွေ၊ သောက်ရေသန့်တွေ၊ အ၀တ်အထည်တွေကိုပေးပို့ လှူဒါန်းခဲ့သလို ဒီမှာလည်း အလှူငွေ ကောက်ခံပြီး လှူဒါန်းပေးပါတယ်။ မီးမရတဲ့ဒေသက ဆေးခန်းတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် နေရောင်ခြည်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ စက်ကိရိယာတွေ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ရတနာသုံးပါးကို မမေ့သလို ကျွန်တော့်နိုင်ငံရဲ့ ကျေးဇူးကိုလည်း မမေ့ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ အကောင်းဆုံး ကူညီပေးဆပ်သွားမှာပါ။ ကျွန်တော့် အိမ်မှာဆိုရင် နှစ်တိုင်းတရားစခန်း ဖွင့်ပေးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ ဆရာဝန်တွေကိုလည်း ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာမေးပွဲတွေ ဖြေနိုင်အောင်၊ အလုပ်ခွင်ဝင်ခွင့်ရအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ဆေးကျောင်းသားတွေ၊ ဆရာဝန်တွေ အနေနဲ့လည်း ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကူအညီ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေဖြစ်ဖြစ် မေးလ်ကနေဖြစ်ဖြစ် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက် အကူအညီပေးပါ့မယ်။ ကျွန်တော်အဓိက ပြောချင်တာကတော့ မြန်မာတွေ မညံ့ပါဘူး။ တကယ်တမ်းကြိုးစားရင် မြန်မာဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံသားနဲ့မဆို ရင်ဘောင်တန်း နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆရာဝန်ငယ်လေးတွေကို အကြံပေးချင်တာက လူနာတွေကို ကုသတဲ့နေရာမှာ မေတ္တာ၊ စေတနာနဲ့ ကုသပေးပါ။ အသပြာဆိုတဲ့ငွေနောက် မလိုက်ဖို့ အရေးကြီးတယ်၊ ကိုယ်ကကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတဲ့ အရာတွေက ကိုယ့်နောက် လိုက်လာပါလိမ့်မယ်။ စေတနာ၊ မေတ္တာကိုရှေ့ထားမှ အောင်မြင်မှု ပိုရနိုင်မှာပါ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Dr. Alexander Myint Swan, http://www.facebook.com/alexander.swan.7543,
အပေါ်ကဗီဒီယိုကို ရှမ်းရပ်စောက်စော်ဘွားသားက ဖြတ်တာဖြစ်ပြီး.. ပြီးခဲ့တဲ့ ၈နှစ်အတွင်း လုပ်ခဲ့တဲ့သင်္ကြန်ပွဲတွေထဲ.. ဗီဒီယိုအဖြစ်တင်ပြတာအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုတခုပါ။
လူ၅၀၀၀လောက်လာတဲ့အဲဒီပွဲထဲက တနေရာမှာ ကျုပ်ပုံလည်းပါသဗျ..။
ဒေါက်တာစုစုလှိုင် ပြောနေချိန်မှာ.. ကပြနေတဲ့ ရွှေရောင်မလေးကိုပဲ..စိတ်ဝင်စားတယ်..
သဂျီင်္းကို.. စိတ် ၀င်မစားဘူး ။
ပဌာန်း (24) ပစ္စည်း (ဆုတောင်း)
အရှင်အာစိဏ္ဏ မှ ဇန်န၀ါရီ 20, 2012 10:00pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ိ ဟေတုပစ္စယော =အကုသိုလ်ကင်းပြီး ကုသိုလ်နဲ့ ယှဉ်တွဲရပါစေသား
အာရမ္မဏပစ္စယော =မျက်စိနဲ့နားသည် နိဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုရပါစေသား
အနန္တရပစ္စယော =များလှစွာသောကုသိုလ်တရားများကိုမျက်မှောက်ပြုရပါစေသား
သမနန္တရပစ္စယော =ရုပ်နှင့်နာမ် အတူရှိသောတရားကို မျက်မှောက်ပြုရပါစေသား
သဟဇာတပစ္စယော =ရုပ်,ရုပ်ချင်း၊နာမ်နာမ်ချင်း ကင်းရှင်းစွာသိပါရစေသား
အညမညပစ္စယော =ရုပ်မှနာမ်သို့ ၊နာမ်မှာ့ရုပ်သို့ ပြောင်းလဲပြီးသိပါရစေသား
နိဿယပစ္စယော =ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးတို့ ၏တည်ရာကိုသိပါရစေသား
ဥပနိဿယပစ္စယော =ရတနာသုံးပါးကို ဦးထိပ်ထားပါရစေသား
ပုရေဇာတပစ္စယော =ရှေးကဖြစ်သော အကုသိုလ်ကိုပယ်ပြီး ကုသိုလ်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရစေသား
ကမ္မပစ္စယော =ကံသုံးပါးတို့ ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ကြပါစေသား
၀ိပါကပစ္စယော = ၀ဋ်သုံးပါးကို ပယ်ဖျက်ရပါစေသား
က္ကုန္ဒြိယပစ္စယော =နာမ်ရုပ်ကို ထိန်းသိမ်းတတ်သောပညာနှင့်ပြည့်စုံရပါစေသား
ဈာနပစ္စယော =သူတော်ကောင်းတရား(၇)ပါး ဥာဏ်စဉ်(၅)ပါးပြည့်စုံပါရစေသား
မဂ္ဂပစ္စယော =ဘာဝနာနှစ်ပါးအပေါင်းကို အာရုံပြုပြီး အထွတ်အထိပ်ပညာကိုရ ,ရပါစေသား
သမွယုတ္တပစ္စယော =သူတော်ကောင်းတို့နှင့်ပေါင်းပြီး (၇)ဖြာသောတရားနှင့်တွဲရပါစေသား
၀ိပွယုတ္တပစ္စယော =သူယုတ်မာနှင့်ဝေးပြီး အကုသိုလ် ကင်းရှင်းရပါစေသား
အတ္ထိပစ္စယော =သမုတိနယ်၏ အရှိကိုဟုတ်မှန်စွာ သိပါရစေသား
နတ္ထိပစ္စယော =ပရမတ္လ္ထမရှိတရား၏ အသိကို မျက်မှောက်ပြုရပါစေသား
၀ိဂတပစ္စယော =ရှေး၌ပွင့်ကုန်ပြီးသော ဘုရားတို့ကို ရှိခိုးရပါစေသား
အ၀ိဂတပစ္စယော =ပွင့်လတ္တံ့ သောဘုရားတို့ ကိုရှိခိုးရပါစေသား
ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာ.. ဆုပေးသူ..ပေးနိုင်သူရှိမှ တောင်းယူလို့ရတာမို့.. ဒီသဘောတရားဟာ.. ဆုပေးနိုင်သူရှိတဲ့.. ထာဝရဘုရားသခင်ကိုးကွယ်သူတွေထံမှာသာ ရှိခဲ့ကြတာပါ..။
ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီး၅ရပ်ထဲ.. ဗုဒ္ဓဘာသာ..သာသနာဟာ.. ဆုတောင်းယူလို့မရတဲ့.. တခုတည်းသော ဘာသာသာသနာကြီးပါ..
မြန်မာတွေကော်ပီကက်လုပ်ရင်း..လုပ်ရင်း.. အရှိန်တွေလွန်ကုန်သမို့.. ပဌာန်း (24) ပစ္စည်း လည်း.. ဆုတောင်းကြီးဖြစ်ပါ့ပလား.. ကွယ်တို့…။ :buu:
ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ဖြင့် ဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့ဖွဲ့တည်ထားတဲ့ ဟောဒီသံသရာစက်ထဲ တစ်ဝဲလယ်လယ် နေရခြင်းမှ လွတ်မြောက်ဘို့ကို ဦးတည်သည်၊ အဲဒီလိုလွတ်မြောက်ဘို့ကိုလည်း ကိုယ့်ဟာကို ကြိုးစားရမည်၊ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ကိုယ့်ကို သွားလေရော့ နိဗ္ဗာန်၊ သွားလေရော့ နတ်ပြည်၊ သွားလေရော့ လူ့ပြည်စသည်ဖြင့် ဖန်ဆင်းမပေးနိုင်၊ တန်ခိုးတွေနဲ့ ဆောင်းချည်းမပေးနိုင်။
Google’s foot-powered Trekker debuted in Hong Kong this month, leaving the Street View car behind, to go off-road to map the island’s trails. The WSJ’s Tobias Reeuwijk suits up to test the tech and tells us how we can apply to be trekkers, too
ဂိုဂယ်.. မြန်မာပြည်တောတောင်တွေထဲ..လာမနှိုက်ခင်… တယောက်ယောက်ကလုပ်ထားရင်.. အလုပ်ကသူ့ဆီလာမယ်ဖြစ်ပြီး.. အဲဒါဟာ.. မြန်မာပြည်နဲ့လူတွေအကျိုးရှိမယ့်.. အလုပ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..
အဲ့ဒါ .. အဲ့ဒါ ..
စိတ်ဝင်စားတယ် သဂျီး ….
ဂိုဂယ် မလာဂင် …
သဘုန်တွေနဲ့ ပေါင်းပီး မြန်မာပြည် တောတောင်တွေထဲ နှိုက်ထားရမယ် …
အဲ့လို နှိုက်ဖို့ လောလောဆယ် သဂျီး ကျုပ်ကို ပိုက်ပိုက် ချေးထားဗျာ …
မီလီယံ ဖြစ်ယင် ပြန်ဆပ်ပါ့မယ် ….
Pot Firms Gain as CVS, Walgreen CompetitionaPipe Dream
Bloomberg-May 13, 2014
In one state alone, Colorado, more than 400 companies are licensed as medical … with government officials predicting sales there could soon reach $1 billion. … Barker said he’s tracking 160 public marijuana companies.
Myanmar Gazette May June 2014
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေနှင့် မြန်မာ့သနပ်ခါး
ဒေါက်တာ ကျော်သန်းထွန်း| May 20, 2014 |
ယခုအခါ မြန်မာ့ဒေသပေါက် မြန်မာသံစစ်စစ် (သနပ်ခါး) အမည်နာမရှိသော ပစ္စည်းကို ဂျပန်နိူင်ငံတွင် မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေ မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကိစ္စမှာ လုံးဝမဖြစ်သင့်သော ကိစ္စရပ်ဖြစ်၍၊ သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသို့် စုံစမ်းမေး မြန်းခြင်း၊ သနပ်ခါးဖြစ်ထွန်းရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပညာရှင်များ ထံသို့ ဆက်သွယ်ခြင်း တို့ကို ရှေးဦးစွာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။
ဤမူပိုင်ခွင့် ဥပဒေကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် မျိုးမြန်တိုးအမည်ဖြင့် ၂၇ . ၁ . ၂၀၁၀ နေ့ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၂၀၁၀ – ၃၁၇၈၁ (ပီ ၂၀၁၀ – ၃၁၇၈၁) ဖြင့်တင်သွင်းခဲ့ပြီး ဤလျှောက်ထားခွင့်ကို (Ms.Sawako Otomo) မစ္စဆာဝါကို အိုတိုမိုက တာဝန်ယူ လျှောက်ထား ပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဂျပန်တရားရုံးမှ (၁၁ ရက် ဩဂုတ်လ ၂၀၁၁) နေ့စွဲဖြင့် မူပိုင်ခွင့်ထုတ်ပြန်ခြင်း အမှတ်၂၀၁၁ – ၁၅၃၁၂၀ (ပီ ၂၀၁၁ –
၁၅၃၁၂ဝ အေ) တိုဖြင့် တရားဝင် အတည်ပြု ပေးခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ ဤသို့သော မြန်မာ့သနပ်ခါးနှင့် ပတ်သက်၍ လူပုဂ္ဂိုလ် တဦးတည်းက လက်ဝါးကြီးအုပ်၍ မောင်ပိုင်စီးရယူခြင်းမှာ လုံးဝ မဖြစ်ထိုက်သော ကိစ္စ တရပ် ဖြစ်သည်။ အမှန်အားဖြင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းတို့နှင့် မြန်မာတမျိုးသားလုံးနှင့် နှီးနွှယ်ပတ်သက် နေသော ကဏ္ဍရပ်တို့အပေါ် နိုင်ငံကြီးသား ပီသစွာ စုံစမ်း ထောက်လှမ်းခြင်းများကို တရားဥပဒေ ရှုထောင့်မှ ကနဦး စူးစမ်း လေ့လာခြင်းများ စနစ်တကျ စိစစ် လုပ်ဆောင်သင့်ပါလျက်၊ ဂျပန်နိုင်ငံဘက်မှ သက်ဆိုင်ရာ မူပိုင်ခွင့်ပြုမ်ိန့်ကို ချမှတ်ပေးခဲ့ခြင်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းတို့အား လေ့လာမှု အားနည်းလှကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာ သိရှိခံစားမိသည်။
စစ်သားဆိုတာ အချိန်တန်တော့လည်း ဇာတိပြတာပါပဲ…
Prayuth: Coup is necessary
Thai army declares coup, nationwide curfew
BANGKOK (AP) — Thailand’s army chief seized power Thursday inabloodless coup, mounting the country’s 12th military takeover since 1932 in what he calledanecessary move to restore stability after nearly seven months of political deadlock and deadly violence.
Gen. Prayuth Chan-ocha saidamilitary commission that imposed martial law two days earlier would now take control of the country’s administration. All national broadcasting was suspended and replaced with the commission’s announcements and broadcasts of patriotic music.
The first announcement wasanationwide curfew from 10 p.m. to5a.m.
There was no immediate sign of soldiers patrolling central Bangkok, but troops were deployed to two areas of the capital where competing groups of protesters had gathered, raising fears of street clashes.
“It is necessary for the Peace and Order Maintaining Command — which includes army, navy, armed forces and police — to take control of governing the country,” Prayuth said in the televised announcement, flanked by the heads of the armed forces.
The pivotal development came after Prayuth declared martial law on Tuesday in what he calledabid to resolve the crisis andaday later summoned the country’s rival political leaders for face-to-face talks. Two days of talks failed to break the impasse.
The latest round of unrest started in November, when demonstrators took to the streets to try to force Prime Minister Yingluck Shinawatra to step down. They accused her of beingaproxy for her popular billionaire brother, former Prime Minister Thaksin Shinawatra, who was ousted ina2006 military coup and now lives in self-imposed exile to avoidajail sentence onacorruption conviction.
တိုင်းပြည်မမွဲတာ.. ဘုရင်ငုတ်တုတ်ရှိနေလို့.. လို့ယူဆမိပါကြောင်း..။
ထေရ၀ါဒက. ငြိမ်းချမ်းခြင်း.. ချမ်းသာခြင်း.. ဆောင်ပေးနိုင်သလား..။ မေးခွန်းထုတ်ဖို့ပါ..။
ငြင်းခုန်ခြင်းမဟုတ်.. အချက်အလက်ထုတ်ပြသာတာ… ဖြစ်ပါကြောင်း….။
ထူးခြားတဲ့တိုက်ဆိုင်မှု(ဆိုချင်ဆို)က.. အဲဒီနိုင်ငံ၅နိုင်ငံဟာ ..ကမ္ဘာရဲ့.. ၅ခုသာရှိသော ထေရ၀ါဒနိုင်ငံများဖြစ်ပါကြောင်း..။
Theravada Buddhism is practiced in…
Pol Pot – Wikipedia, the free encyclopedia
In 1979, after the Cambodian–Vietnamese War, Pol Pot fled to the jungles of ….. of Cambodia suggests that the death toll was between2and 2.5 million(over 25% of the country’s population), witha…
Laos, one of the world’s few remaining communist states, is one of east Asia’s poorest countries. Since the collapse of the Soviet Union in 1991 it has struggled to find its position withinachanging political and economic landscape.
Myanmar’s ethnic conflicts: Waiting for the dividend | The …
Oct 5, 2013 – This would not get much attention anywhere else in Myanmar. … Officially, it brought to an end the world’s longest-running civil war, begun in …
Thailand’s Military Stages Coup, Thwarting Populist Movement
New York Times ‎-5hours ago
The coup was at least the 12th military takeover since Thailand abandoned the absolute monarchy in 1932. But unlike many previous coups, …
တော်ကြာ ဗုဒ္ဓဘာသာမကောင်းဖြစ်မှာစိုးလို့..။ အောက်မှာ မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ(အများစု)ကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံတွေ..။
ငြိမ်းချမ်းခြင်း.. တည်ငြိမ်းခြင်းနဲ့.. ချမ်းသာခြင်း.. စာရင်းမလုပ်ပြတော့ပါဘူး..။
တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ စင်္ကာပူ ပါနေမင့်နော..။
Mahayana is found throughout East Asia (China, Korea, Japan, Vietnam, Singapore, Taiwan etc.)
Bits Blog: The Google Car TakesaStep Away From BoringMAY 27, 2014
A fleet of Google self-driving cars lined up at the Computer History Museum in Mountain View, Calif., on Tuesday.
What the Future Holds: When Driverless Cars Break the LawMAY 13, 2014